Ahụmahụ na-ejikarị arụ ọrụ, ma ọ ga-abụ na ọ bụghị otu ihe ahụ ka ọ dị.
Isi ihe nke abuo maka imeghari karia uzo di mfe bu ihe di iche iche nke ihe ojoo . Nnwale nke Schultz et al. (2007) egosi n'ụzọ doro anya otu otu ọgwụgwọ ahụ nwere ike isi nwee mmetụta dị iche na ụdị mmadụ dị iche iche (ọgụgụ 4.4). N'ọtụtụ nchọpụta analog, Otú ọ dị, ndị nnyocha na-elekwasị anya ná nkezi ọgwụgwọ n'ihi na e nwere ọnụ ọgụgụ dị nta nke ndị so na ha bụ ndị a ma ama banyere ha. Otú ọ dị, n'ọmụmụ ihe ndị a, ọ na-abụkarị ọtụtụ ndị ọzọ na-amụba, a makwaara ndị ọzọ banyere ha. N'ọdịiche data a dị iche iche, ndị na-eme nchọpụta bụ ndị nọgidere na-eme atụmatụ nanị ọgwụgwọ ọgwụgwọ ole na ole ga-echefu ụzọ nke nyochaa banyere heterogeneity nke ọgwụgwọ nwere ike inye nkọwa banyere otu esi agwọ ọrịa, otu esi eme ka ọ dịkwuo mma, na otu esi eche ya. ndị nwere ike ịba uru.
Ihe omuma abuo nke onodu di iche iche nke oria mmuta sitere na nchoputa ndi ozo banyere akuko Energy Energy. Nke mbụ, Allcott (2011) ji nnukwu ụdị nrịba (600,000 ezinụlọ) iji kesaa ihe atụ ahụ ma kọwaa mmetụta nke Report Energy Energy site na decile nke iji ọgwụ ike eme ihe. Mgbe Schultz et al. (2007) hụrụ ọdịiche dị n'etiti ndị ọrụ dị arọ na ndị ọrụ ọkụ, Allcott (2011) chọpụtara na e nwekwara ọdịiche dị n'etiti ìgwè ọrụ dị arọ na nke ìhè. Dịka ọmụmaatụ, ndị ọrụ kachasị ike (ndị nọ n'elu decile) belata ike ha dị okpukpu abụọ ka onye dị n'etiti ìgwè ọrụ dị arọ (nọmba 4.8). Ọzọkwa, ịtụle mmetụta site na omume ọgwụgwọ tupu mgbe ahụ gosipụtara na ọ dịghị uru ọkpụkpụ ọ bụla, ọbụna maka ndị kachasị ọrụ (ọgụgụ 4.8).
Figure 4.8: Ụdị edemede nke ọgwụgwọ na Allcott (2011) . Mbelata nke iji ike eme ihe dị iche iche maka ndị mmadụ dị iche iche nke usoro ntọala. E si na Allcott (2011) , nọmba 8.
N'akwụkwọ metụtara ya, Costa and Kahn (2013) kwuru na irè nke Ụlọ Energy Energy nwere ike ịdịgasị iche na-adabere na echiche onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị na onye so na ya nwere ike ime ka ndị mmadụ nwee echiche ụfọdụ iji mee ka ọkụ eletrik ha. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ha kwuru na Ụlọ Nche Maka Ụlọ Ike nwere ike ịmepụta mmetụta dị mma maka ụfọdụ ụdị mmadụ. Iji chọpụta nke a, Costa na Kahn jikọtara data Opower na data zụtara site n'aka onye nnọchiteanya nke atọ nke gụnyere ozi dịka ntinye aha ndọrọ ndọrọ ọchịchị, onyinye nye ndị na-ahụ maka gburugburu ebe obibi, na ime ụlọ na mmemme ike. Site na oge a jikọtara ọnụ, Costa na Kahn chọpụtara na Ụlọ Energy Report na-emepụta mmetụta yiri nke ahụ maka ndị na-enwe nkwenkwe dị iche iche; ọ dịghị ihe àmà na-egosi na otu ọ bụla gosipụtara mmetụta ọjọọ nke anụ ọhịa (nọmba 4.9).
Akwukwo nke 4.9: Ugwo okwu nke ihe ojoo na Costa and Kahn (2013) . Ntube ọgwụgwọ a ga-eme atụmatụ maka ngosipụta dum bụ -2.1% [-1,5%, -2.7%]. Mgbe ha jikọtara ozi site na nnwale na ozi gbasara ezinụlọ, Costa and Kahn (2013) jiri usoro nchịkọta akụkọ iji chọpụta mmetụta ọgwụgwọ maka otu ìgwè mmadụ. Edere atụmatụ abụọ maka otu ọ bụla n'ihi na atụmatụ ahụ dabere na nchịkọta nke ha gụnyere n'ime ụdị ndekọ ha (lee ụdị 4 na 6 na tebụl 3 na 4 na Costa and Kahn (2013) ). Dị ka ihe atụ a na-egosi, mmetụta ọgwụgwọ nwere ike ịdị iche maka ndị dị iche iche na atụmatụ nke ọgwụgwọ ndị na-esi n'ụdị nchịkọta akụkọ pụrụ ịdabere na nkọwa nke ụdị (Grimmer, Messing, and Westwood 2014) . E si na Costa and Kahn (2013) , tebụl 3 na 4.
Dị ka ihe atụ abụọ ndị a na-egosi, na afọ dijitalụ, anyị nwere ike ịkwapụ site na ịtụle atụmatụ ọgwụgwọ dị iche iche na-atụle hịgrogeneity nke ọgwụgwọ n'ihi na anyị nwere ike ịnwe ọtụtụ ndị ọzọ na-abata ma anyị maara ndị ọzọ banyere ndị ahụ. Ịmụta banyere ụdị dịgasị iche iche nke ọgwụgwọ nwere ike ime ka ịchọta ọgwụgwọ ebe ọ kachasị dị irè, nye ihe ọmụma ndị na-akpali nkwalite nkà mmụta ihe ọhụrụ, ma nyekwa nkọwa banyere usoro omume, isiokwu nke m na-atụgharị ugbu a.